दसैंको टिका लगाउन माइती आएकी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिईन तर घर नपुग्दै यस्तो खबर आएपछि कसरी पत्याउनु ? – Classic Khabar
दसैंको टिका लगाउन माइती आएकी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिईन तर घर नपुग्दै यस्तो खबर आएपछि कसरी पत्याउनु ?
November 2, 2021 69
‘दसैंको टिका लगाउन असोज २९ गते माइती आएकी मेरी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिइन्। घर पुगेको केही घन्टा नबित्दै उसले आ,त्म ह,त्या गरी भन्दा कसरी पत्याउनु?’ मृतक अञ्जली गौतमका बाबु होम बहादुर गौतमले छोरीको मृत्यु शं,क्कास्पद भएको भन्दै शं’का व्यक्त गरे। ‘उसलाई केही समस्या भए त माइतमै बस्थी होला नी? आ,त्म ह,त्या नै गनुपर्ने केही विषय भएको भए हामीलाई सुनाउँदी हो। ज्वाईले दुख दिन्छ भनेर आमालाई भनेकी रहिछन्। परिवार नै मिलेर उसलाई मा,रेका हुन्।’ उनले भने।
चौरी देउराली ३ काभ्रेकी १९ वर्षीय अञ्जली गौतमले एक वर्षअघि गाँउ नजिकैका २८ वर्षीय लक्ष्मण मोक्तानसँग अन्तर जातिय प्रेमविवाह गरेकी थिइन्। तर ट्याक्सीचालक लक्ष्मण र अञ्जलीबीच विहे गरेको ६ महिनादेखी नै झ,गडा सुरु भयो। श्रीमानले वास्ता गर्न छाडेको र पटकपटक आफ्नो घर जा भन्ने गरेको भन्दै उनी माइतमा सुनाउने गर्थिन्।
विवाह गरेको १ वर्ष पनि बितेको थिएन। असोज ३० मा आफ्नै घरको कोठामा उनी मृत भेटिइन्। उनका बुवाका अनुसार अञ्जलीको मृत शरिर उनकै कोठाको पलङमा लडिरहेको थियो। घाँ,टिमा सल बाँ’धिएको थियो। सल मिलाएर कैचीले का’टेजस्तो थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै अञ्जलीका माइती पक्ष आन्दोलनमा छन्। ‘बुहारी मार्न पाँइदैन, ह,’त्यारालाई कारवाही गर’ भन्दै उनीहरुले जिप्रका अघि नारावाजी गरिरहेका छन्।मृतक अञ्जलीका काका प्रेम गौतमका अनुसार प्रहरीले आ,’त्म ह,’त्या दुरुत्साहनको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हाे। प्रेम भन्छन्, ‘छोरीको शं,स्कास्पद मृ’त्यु भएपछि हामीले आ,त्म’ह,त्या दुरुत्साहनको जाहेरी दर्ता गर्न पटकपटक कोशिस गर्यौं। तर प्रहरीले जाहेरी लिएन। हामीले मानव अधिकार तथा महिला आयोग पुगेर उजुरी दियौं। अनि मात्रै घटनाको १४ औं दिनमा जाहेरी दर्ता भएको छ।
‘माइती पक्ष नपुगी छोरी झु,ण्डिएको सल किन काटीयो? घटनास्थलमा हामीलाई जान, फोटो भिडियो खिच्न समेत दिइएन। प्रहरी नै मिलेर प्रमाण नष्ट गर्यो। हामीलाई ज्वाईमाथी शं’का छ। उसलाई प्रक्राउ गरेर अनुसन्धान अहिलेसम्म गरिएको छैन। अनुसन्धानका न्युनतम प्रक्रियाहरु पनि पुरा गरिएन। छोरी मा,र्ने ज्वाई निस्फिक्री गाँउघर डुलिरहेको छ। हामीलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गर्न मिल्छ?’,उनले भने।
अञ्जलीका बुबा प्रेमका अनुसार लक्ष्मणले छोरी भगाएपछि उनीमाथि बालविवाहको मुद्धा गर्न खोजेका थिए तर अञ्जलीले मेरो खुसिले विवाह गरेको हुँ भन्दै मुद्धा गर्न दिइनन्। उनले भने,‘अञ्जलीले आफ्ना साथीलाई फोन गरेर खान लाउन नदिएको, लक्ष्मणले अरु केटी लिएर हिँड्ने गरेको तथा बच्चैमा बिहे गरेको भन्दै सुनाउने गर्थिन्।
माइत आउँदा पनि आमालाई सबैजनासँग कुरा गर्नु छ भन्थिन्। दसैंमा मिलेर बस्ने र पछि कुरा गर्छु भन्दै उनी आफ्नो घर गएकी थिइन्। तर एकाएक मृत्युको खबर आयो, उसलाई मा’रीएको हो। हैन भने भित्रबाट ढोका लक गरेको अवस्थामा ला,स किन भेटियो। सासुले सल का’टेको भन्छन्। सल काट्दा ला,श भुइमा बजारिनु पर्ने? सलक्क ओछ्यानमा कसरी पुग्यो?’, उनले भने।
माओवादीका स्थानीय नेतासमेत रहेका दुर्गा सिंह लामाको छोरा भएकै कारण प्रहरीले लक्ष्मणलाई जोगाउन लागीपरेको माइती पक्षको आरोप छ। उनीहरु भन्छन्, मृतकको मोवाइल बरामद गरिएको छ। तर घटनाको १६ दिन पुग्दा पनि लक खोल्न सकिएन भन्दै कुनै जानकारी दिएको छैन।
यस्तै आरोपीत लक्ष्मणले प्रयोग गर्ने मोवाइल पनि बरामद नगरिएको, घटनाका सम्वन्धमा श्रीमान र सासुसँग कुनै वयान नलिएको माइती पक्षको आरोप छ। अञ्जली गौतम मृत्यु प्रकरणमा अन्नपुर्णपोष्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी हरि खतीवडासँग जानकारी मागेको थियो। उनले घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भैरहेको र प्रमाण पुगेपछि आरोपितलाई प्रक्राउ गरीने जानकारी दिए।
पोष्टमार्टम रिर्पोट अहिलेसम्म नआएको बताउँदै खतिवडाले घटनाको अनुसन्धान भैरहेकाले थप जानकारी दिन नमिल्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘यस्तो घटनामा अनुसन्धान गर्न हामीलाई कानुनले २ वर्षसम्म समय दिएको छ। समयमै अनुसन्धान सक्छौं।’ अन्नपूर्णपोष्ट बाट
Prevको हुन भिर पाखामा डोजर चलाउने युवती ? कसरि भईन एका एक भाईरल (भिडियो)
Nextर ग तको सिन्दुर हालेर प्रेम विवाह गरेका श्रीमानको १२ वर्ष पछि जब यस्तो रहस्य खुल्यो (भिडियो हेर्नुस्)
आज १५ गतेका मुख्य समाचार- लकडाउन खुकुलो, नयाँ भाईरस फैलियो, परीक्षा हुने, गाडी यर्पोट खुल्ने
पल र मबीच कुनै प्रकारको अनैतिक सम्बन्ध छैन : समीक्षा अधिकारी